Iyo yekudiridza premium inokanganisa sei kudyara? | Ehupfumi Zvemari
Sezvo musiyano uri mukuru, zvinokanganisa kudzikira kwemari yakamisikidzwa sezvo misika yemasheya iri nyore kuitisa kudonha kwakapinza. Mupfungwa iyi, musiyano weSpanish bond maererano nerudzi rweGerman bund iri parizvino 76 hwaro hwenongedzo, chinhu chinofarira kudyara mumusika wemasheya wenyika. Uye icho chinhu chave chakakosha zvakanyanya nekuda kwekusagadzikana kwakaitika munyika dzine huremu hwakakura mukati meEuropean Union, sezvazviri mune chaiyo nyaya ye Italy neSpain pachayo.
Iyo premium ngozi ndeimwe yeaya akasiyana emari ayo munhu wese anotaura nezvake uye vashoma vanonzwisisa. Chero zvazvingaitika, inoteverwa nevashambadziri nekuti inovapa iyo isinganzwisisike pfungwa nezve zvinangwa zvemisika yemari. Hazvishamisi kuti ndiko kudzoka kwakawedzerwa uko kunoiswa nevemari zvinoenderana nenjodzi yavanofanira kufunga nezvayo. Panguva ino, iyo yekuSpanish yengozi iri pamatanho e76 hwaro poindi. Asi izvi zvinorevei chaizvo? Huye, inoratidza iwo mukana wekubatsira pakati peSpanish neGerman chikwereti. Chaizvoizvo chirevo chekureva ndicho chiGerman nekuti ndicho chinopa chengetedzo kune vanoita mari uye nekudaro chinoshanda semuenzaniso kune dzimwe nyika dzeEuropean continent.
Nenzira iyi, apo chisungo cheGerman (bund) kusvika kumakore gumi parizvino inobhadhara kufarira pedyo ne0,520%, veSpanish vanozviita ne1,281%, uye musiyano unokonzerwa nekushanda uku waizopa iwo 76 hwaro hwenongedzo paripo parizvino paripo peSpanish. Iyo premium yengozi yakanyanya kukosha kupfuura zvaunogona kufunga pakutanga. Haisi chete thermometer yekuvandudza hurongwa hwekudyara muyakagadziriswa mari, asiwo kuvhura kana kuvhara nzvimbo mumisika yemasheya. Chero zvazvingaitika, zvinoenderana nedanho rakatarwa nenzvimbo idzi.
1 Kukanganisa pamusika wekutengesa
2 Kukanganisa pamari yakatarwa
3 Nzira yekudzivirira sei mari?
4 Kukuru kwakasiyana mukudyara
5 Tora mukana wekusagadzikana
6 Tsvaga zvinogadziriswa zvigadzirwa
Kukanganisa pamusika wekutengesa
Chekutanga mhedzisiro iyo ichave pairi mukudyara inozoitika muzvinzvimbo mumusika wemasheya. Kunyangwe iyo premium yengozi isiri yakabatana zvakanyanya nemusika uyu, chiitiko chayo chinopfuura zvinoshamisa. Kune chikonzero chiri nyore kwazvo kune vashoma uye vepakati varimi kuti vanzwisise. Rini kuomesa mutsauko (sezvazviri kuitika kuSpain) chichava chiratidzo chakajeka chekuti kune chivimbo mune hupfumi hwenyika. Uye uyu musika manzwiro anobva angotamisirwa kumusika wemasheya, iine kuwanda kuwanda mairi. Kungofanana nekupararira kuchikonzerwa, inogadzira zvinopesana uye inogara iri yakaipa kwazvo pamusika uyu.
Kazhinji nyika dzose dzine misiyano pamusoro pe250 uye 300 hwaro hwenongedzo vane matambudziko akakomba kwazvo muzvikamu zvemasheya. Nemasimba ekutengesa kumanikidza nekuda kwekusavimba kwemisika yemari nekuda kwekushomeka kwehupfumi hwavo. Kunze kwekudzokorodza kana kushoma kwekubata nguva kunozoshandura zvigadziriso munguva dzakaoma kwazvo dzemari. Asi chero zvakadaro, pane dhinomineta iro rakajeka chaizvo uye nderekuti sezvo uyu musiyano uri mupamhi unozokanganisa misika yemari.
Kukanganisa pamari yakatarwa
Kune rimwe divi, kukanganisa kwaro pamari yakatarwa kunotonyanya kutaurwa. Ichi chikonzero chakakonzerwa nenyaya yekuti kana iyo mari yekudyara yasunungurwa, zvinounza chivimbo chakanyanya kune chikamu chevashambadziri nezve kukosha kwechikwereti cheveruzhinji. Paunenge uri muchiitiko chakapesana, iyo premium inokwira, mutengo wechisungo unowira mumutengo. Ndokunge, yakawanda mubereko inobhadharwa. Iyi mamiriro anokanganisa chikamu chakanaka cheyakagadziriswa mari yekudyara mari uye kunyangwe mumamodeli akasanganiswa ayo akavakirwa pamari yemari iyi. Kusvika padanho rekuti mumazuva mashoma kwazvo vanorasikirwa nechikamu chakakosha kwazvo chekukosha kwavo. Iyi inguva chaiyo kana zvichizofanira kutenderera portfolio yemari kudzivirira kurasikirwa kubva pakuiswa mune chirevo chemari yevatori vechikamu mune izvi zvigadzirwa zvemari.
Chimwe chinhu chinofanirwa kuongororwa muprimiyamu yengozi inyaya yekuti mabhanga anosarudza kukwidza iyo mogeji chimbadzo uye chero mutsara wechikwereti. Nepo izvo zvigadzirwa zvikuru zvakagadzirirwa kuchengetedza (nguva yekuisa mari, manotsi ekuvimbisa kubhengi kana maakaundi ane goho repamusoro) anogona kunyudzwa mumitengo yemitero isingakwikwidze kupfuura kusvika ipapo. Sekumanikidza kwazvinoita hurumende kukwidza mutero nekuda kwematambudziko akakurisa ayo nyika dzinofanirwa kuzvipa mari. Imwe yemhedzisiro yezviito izvi ndeyekuti vashandisi vazove nekashoma yekuchengetedza kugona kutarisana nekudyara kwavo.
Nzira yekudzivirira sei mari?
Mukati meiyi mamiriro ezveupfumi, kusiyanisa mumusika wemasheya kunotendera kuti kurasikirwa kuderedzwe mumamiriro asingafadzi emisika yemari. Pasina mubvunzo, chimwe chezvinangwa zvikuru zvemumwe muzvinabhizimusi chiri, mukuwedzera kune shandisa zvakanyanya zvinhu zvako wega, chengetedza nzvimbo yavo kuzviitiko zvinogona kuitika mumisika yemari.
Izvo zvakakosha kuti uwane purofiti mumusika wekutengesa sezvazviri kuchengetedza mari yakachengetwa yakachengeteka. Mukudyara muzvikwereti hapana mashandiro erudzi chero rupi zvarwo anovimbiswa, kwete kunyange kushoma. Asi pane izvo zvinopesana, zvinoenderana nezvinorehwa nemisika. Chero zvazvingaitika, kuburikidza neakateedzana marongero ekudyara, zvinangwa zvinogona kuzadzikiswa.
Kukuru kwakasiyana mukudyara
Ehezve, imwe yeakakosha mapikicha ekupa hukuru chengetedzo kune investment mumusika wemusika yakavakirwa pane yakakura kusiyanisa mune yekuchengetedza portfolio. Ndokunge, pachinzvimbo chekusarudza kambani imwe yakanyorwa, sarudzo yakanakisa ndeyekugadzira dengu rakaenzana remasheya. Izvi zvinoreva chimwe chinhu chiri nyore se usadzokorora zvikamu, mitsara yebhizinesi kana kunyangwe iwe uchigona stock indices. Ichave iri zano rinoshanda kwazvo kusati kwasvika kwezviitiko zvakanyanya kushata zvemari. Kusvika padanho rekuti kurasikirwa kukuru kwazvo muquity kuchadzivirirwa uye kuti kuchengetedza kwevashandisi kuchave panjodzi chero nguva.
Imwe nzira inouya kubva kumaturusi chaiwo anopiwa nemisika. Mune ino kesi, inomiririrwa nemirairo yakatumidzwa rega kurasikirwa o kurasikirwa muganho. Seizvo zita rinoratidzira, ivo vanodzivirira kudonha kubva pakuva vane chisimba chaizvo. Nekuti ichave investor iye anozomisa kurasikirwa zvichienderana neprofile yaanopa semudiki uye wepakati investor. Iri izano rinoshanda kwazvo rekuchengetedza nzvimbo dzako mumusika wemasheya uri pasi pekutonga. Kwete pasina, zvichagara zviri nani kusiya 3% pane 15% mumitengo yekuchengeteka.
Tora mukana wekusagadzikana
Zano rechitatu rinozopa kusapindirana kune ekudyara kutora mukana pazviridzwa zvinopihwa nehunyanzvi kuongorora kuti uzvidzivirire kubva pakuchinja kwemisika yemari. Mupfungwa iyi, chiito chakanakisa icho vatyairi chavanogona kutora chinobva munzvimbo dzekuvhura kubva kumusoro. Njodzi yekukanganisa ichave yakadzikira uye ichave chombo chakasimba kwazvo chekudzivirira kubva pamamiriro asingadiwe anokanganisa misika yemasheya. Nekuti inertia yemisika ndeye kuramba uchikwira.
Kune rimwe divi, sisitimu iyo isingatombokundikana pamusika wemasheya ndeyekuvhura nzvimbo munzvimbo dzekuchengetedza dzakatyora kumwe kumwe kwehukuru. Pakati pezvimwe zvikonzero, nekuti ichave yajekesa nzira yekusvika pamitengo yemari inodarika kupfuura pakutanga. Zvinoratidzwa neizvozvo musika kufarira mune kutenga kwakakwirira kupfuura mukutengesa. Muzviitiko zvese izvi, hazvizove zvakanyanya kuomesa kuita kuti mashandiro abatsire, zvirinani kana akaitirwa panguva ipfupi semhedzisiro yemamiriro ekuchengetedzwa anoenda nemamiriro aya. Iko pasina pasina kupokana, chimiro chinonyanya kubatsira ndeye yemahara-kusimuka imwe nekuti hapasisina zvipingamupinyi munzira. Kuva nerwendo rwunoshamisa rwekukwira sezvo pasina miganho yekumisikidza mutengo wayo. Ndiyo imwe yenguva umo kuyedza kuita kuti zvinhu zviite purofiti hazvigone kutambiswa sezvo njodzi dziri shoma.
Tsvaga zvinogadziriswa zvigadzirwa
Izvo zvisina kukosha kukosha kwekutsvaga kwechigadzirwa chinoshanduka chinogona kuenderana nemamiriro matsva emisika yemari. Izvo hazvina basa kuti iyi yakasarudzika zano haigone kuiswa kubva mukutenga uye kutengeswa kwemasheya pamusika wemusika. Ndo izvo izvo inoshanda manejimendi mari uye izvo zvinobvumidza kuchinjika kune chero mamiriro ezvinhu, zvese zvinowedzera uye zvine mutsindo. Nekuti mamaneja anotsvaga akanakisa emari zvinhu, kunyangwe kana zvichibva pamari yakatarwa kana kubva kune mamwe mamodheru. Iyo ndeimwe yesarudzo dzinoshanda kwazvo yekugadzirisa mamiriro ekunze asina kugadzikana mumisika yemari.
Kushanda kwaro pamusika wemasheya, mune chero mamiriro ezvinhu, kwakanyanya kuomarara uye kunosanganisira kusarudza zvakanyanya kuchengetedzwa kwemvura zvinokutendera iwe kuti upinde uye ubudise misika pamitengo inodiwa. Pasina kutya kubatwa navo. Ndokunge, uine kukosha mumutengo uri kure kwazvo nekutenga kwako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Iyo yekudiridza premium inokanganisa sei kudyara?